I-China Assembly yeemveliso ezigqityiweyo kunye nabenzi bemveliso egqityiweyo kunye nabathengisi | I-P & Q
Indibano yeemveliso ezigqityiweyo kunye neemveliso ezigqityiweyo
Umzi mveliso wendibano ye-P & Q ulala eHaining, eZhejiang, China. Akukho ngaphantsi kwe-6000 m2.
Imveliso esebenza kulawulo lomgangatho we-ISO9001. Kwaye iofisi kunye nomzi mveliso kulawulwa kwinkqubo ye-ERP ukusukela ngo-2019.
Umzi-mveliso wendibano ye-P & Q ufuduselwe eHaining ukusuka eSongjiang, eShanghai. Iiyure nje eziyi-1.5 ukuqhuba ukuya kwi-P & Q Shanghai ofisi. Ekuqaleni le mveliso yendibano yayizimisele ukugqiba yonke indibano yesibane se-LED kwaye iswele indibano yamalungu. Umasifundisane wethu unokusinceda ukulawula yonke inkqubela yebandla, kunye nexesha lokukhokela.
Idilesi eneenkcukacha ngolu hlobo lulandelayo:
Inani. 11 Isakhiwo • Hayi. 8 Haining Avenue • HAINING, JIAXING • 314400 China
Njengengxenye yeenkonzo zokubonelela ukuphela kokuphela kokubonelela kubavelisi, i-P & Q inokwenza uluhlu olubanzi lweendibano, ukusuka kwindibano yamacandelo amabini ukuya kwiindibano ezintsonkothileyo. Iinkqubo zokuqinisekiswa komgangatho zimiselwe ukuqinisekisa umgangatho ofanayo wendibano nganye.
I-P & Q ibonelela ngobuxoki kunye neendibano zesiko eziphuhlisiweyo ukuhlangabezana nokubalulwa komntu ngamnye kunye nokunyamezelana kwenxalenye nganye kunye nomthengi ngamnye. Abathengi baxhomekeke kwi-P & Q ukumisela eyona nkqubo ifanelekileyo yokuvelisa kunye nenkqubo, kwaye emva koko bavelise izinto kunye nokulawula yonke inkqubo yokubonelela, kubandakanya nolawulo lwempahla. Isiphumo sokugqibela? Ukuqulunqwa komgangatho ophezulu ngokufanayo kunye neendibano.
Izinto eziluncedo ze Iindibano zeMveliso
● Iinxalenye ziziswa zilungele ukusetyenziswa
● Ukwanda kokusebenza kwemveliso
● amaxesha aphantsi akhokelayo
● Ukonga ixesha nemali
● Iindibano ezilula okanye ezinzima
Izinto ezisetyenzisiweyo yeeNdibano
Indibano, ukupakisha & ukuthumela kwakhona
Njengoko kungqinwa yimigangatho esiyibambayo; I-ISO 9001, i-P & Q iya kudibana, ipakishe, ithumele kwaye ilawule icandelo elipheleleyo okanye i-subassembly iye kumgangatho ophakamileyo. Siqinisekisa ukuba imveliso yakho ihanjiswa kumgca wemveliso yakho ngohlobo nangexesha olifunayo.
Egqithileyo Iphepha lesinyithi
Okulandelayo: Ukulahla ukukhanya kwe-aluminium bulkhead ukukhanya
Ingcinezelo High Die siwisa
Lokukhanyisa lwemidlalo Die Castings
Plastic Inaliti Ukubumbela Izahlulo
Ingcinezelo Die Ivoti
Isinyithi sePhepha lesinyithi